Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.5.2 Leverage heterogeneity
Raha vantany vao nandrisika olona maro hiasa amin'ny olan'ny siansa tena izy ianao, dia ho hitanao fa samy hafa be ny mpandray anjara anao: tsy mitovy ny fahaizan'izy ireo sy ny ezaka ataon'izy ireo. Ny fanehoan-kevitra voalohany ataon'ny mpikaroka ara-tsosialy marobe dia ny miady amin'io fihenjanana io amin'ny fiezahana hanilika ireo mpandray anjara marevaka ary avy eo manandrana manangona fanazavana mivaingana avy amin'ny olona rehetra. Ity no fomba ratsy hanamboarana tetikasa fiaraha-miasa marobe. Raha tokony hiady amin'ny tsy fahasalamana ianao dia tokony hampiasa izany.
Voalohany, tsy misy antony tokony hisintonana ireo mpandray anjara mahay. Amin'ny antso an-kalalahana, ireo mpandray anjara mavitrika dia tsy miteraka olana; Tsy mandratra na iza na iza ny anjara birikiny, ary tsy mila fotoana izy ireo mba handinika. Amin'ny tetikasa fanatanterahana ny olona sy ny tetikasa fanangonam-baovao, ny endriny tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso ny kalitao dia amin'ny alàlan'ny fanamafisana, fa tsy amin'ny fisarihana avo lenta ho an'ny fandraisana anjara. Raha ny tena izy, fa tsy ny fanararaotan'ireo mpandray anjara ambany, dia ny fomba tsara kokoa hanampiana azy ireo handray anjara tsara kokoa, toy ny nataon'ireo mpikaroka ao amin'ny eBird.
Faharoa, tsy misy antony tokony hanangonana antontam-baovao maromaro avy amin'ny mpandray anjara tsirairay. Ny fandraisana anjara amin'ny tetikasa fiaraha-miasa marobe dia tena tsy (Sauermann and Franzoni 2015) , ary misy olona vitsy mandray anjara betsaka-indraindray antsoina hoe loha matavy - ary maro ny olona mandray anjara kely-indraindray antsoina hoe lavaka lava . Raha tsy manangona vaovao avy amin'ny loha matavy sy ny rambony lava ianao dia mamela malalaka fanazavana tsy fantatra. Ohatra, raha nanaiky ny 10 ary 10 isaky ny tonian'ny famoahana, dia ho very ny 95% amin'ny fanovana (Salganik and Levy 2015) . Noho izany, amin'ny tetikasa fiaraha-miasa marobe, tsara kokoa ny fampiroboroboana ny tsy fitoviana fa tsy miezaka ny hanafoana izany.